Muxuu ka yiri Van Dijk kaddib markii ay kooxdiisa Liverpool ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska 30 sano kaddib?? – Gool FM
Muxuu ka yiri Van Dijk kaddib markii ay kooxdiisa Liverpool ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska 30 sano kaddib??
Dajiye June 26, 2020
(Liverpool) 26 Juun 2020. Daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in Reds ay ku guuleysatay horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa ku guuleysatay horyaalkii ugu horreeyay ee Premier League tan iyo 1990-kii, kaddib markii ay Manchester City guuldarro 2-1 kala kulantay kooxda Chelsea, ciyaar xalay ka dhacday garoonka Stamford Bridge ee ka tirsaneyd kulamada 31-aad.
Haddaba wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Virgil van Dijk, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Tani waa arrin layaab leh, alla muxuu xilli ciyaareed ahaa, waxaan aheyn kuwo fiican”.
“Waa arrin wanaagsan inaan qeyb ka noqdo ciyaartoyda kooxdan, sidoo kale aan qeyb ka noqdo taariikhdan, isla markaana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guuleystay horyaalka Premier League”.
“Dabcan waan daawaday kulanka Chelsea iyo Manchester City, waxaan dareemay walwal kaddib laadkii xurta ahaa ee uu tuuray Kevin De Bruyne, alla muxuu ahaa gool cajiib ah runtii”.
“Laakiin markaas waxay ahayd uun dabaal-deg, dhammaanteen waan ku faraxnaa nafteena, runtii ma sharxi karo dareenka si aan u rumeeyo”.
Si kastaba ha noqotee, Liverpool ayaa u baahneyd in Manchester City ay guuldarreysato ama ay barbaro gasho, kulankii Chelsea ee xalay ka dhacay garoonka Stamford Bridge, kaasoo ku soo idlaaday 2-1 ay ku adkaatay Blues.
Erling Håland oo ka hadlay xiisaha kaga imaanaya kooxda Real Madrid
Arthur oo ugu dambeyn aqbalay Juventus, iyo waqtiga uu u duulayo Turin oo la shaaciyay